▷ Turbo Cecofry 4D ▷ Falanqaynta, Fikradaha iyo Qiimaha ugu Fiican 2022
Turbo Cecofry 4D: Fryer Saliid La'aan ah
Haddii aad raadineyso mid saliid aan saliid lahayn hufan oo casri ah Jikadaada, waxaan u soo jeedineynaa Cecofry Turbo 4D, model leh faa'iidooyin kala duwan kuwaas oo hagaajiya aaladaha kale ee astaanta Isbaanishka iyo sidoo kale tartanka.
Cusboonaysii: Cecotec Turbo Cecofry 4D Fryer hadda lama heli karo. Halkan waxaa ah beddelkaada ugu fiican:
Fryer-ka qoto dheer ee Proscenic T22
Haddii aad weli rabto inaad ogaato wax walba oo ku saabsan qaabka Fryer-ka ee Cecotec ee la joojiyay, maqaalkan waxaan ku arki doonaa sifooyinkan, iyo sidoo kale kuwa ugu muhiimsan ka hor inta aanad dooran qalabkan: Awoodda, awoodda ugu badan, Faallooyinka Macaamiisha kuwaas oo hore u tijaabiyey iyo halka ay ka iibsanayaan qiimaha ugu fiican.
Sii wad akhrinta oo ogow sababta moodeelkan Cecotec uu u yahay kan ugu badan kala duwan oo dhamaystiran suuqa hadda. U bax
➤ Astaamaha lagu soo bandhigay Cecofry Turbo 4D
➤ Turbo Cecofry 4D qiimaha
➤ Sidee u shaqeysaa Cecotec Cecofry 4D?
Turbo Cecofry 4D Fikradaha
➤ Iibso Cecofry 4D
Aan marka hore eegno sifooyinka ugu muhiimsan ee ay tani ku jirto Shiilan saliid-free cecotec iyo faa'iidooyinka ay keento kuwa u doorta madbakhdooda:
▷ Awoodda 3 Litir iyo laba Aag karinta
Awoodda baaldiga ugu weyn waxay gaartaa ilaa 3 litir, taas oo u dhiganta 1.5 kilo oo baradho ah waxayna ku filnaan doontaa qiyaastii. 4 ama 5 xabbo oo ugu badnaan.
Baaldigan oo ah 27 sentimitir dhexroorku wuxuu leeyahay a Dhagax saddex lakab oo dhoobo ah oo aan dhejis ahayn. Dahaarkani wuxuu ku fiican yahay inuu ka ilaaliyo suxuuntaada inay ku dhegaan xagga hoose iyo fududee nadiifinta.
✅ Jikada oo leh 2 Heer
Waa maxay faa'iidada weyn, taas oo ka soocaysa shiilanyada caafimaadka leh intooda badan, waxay leedahay laba aag cunto karinta oo ku yaal hal qalab. Taasi waa, waad diyaarin kartaa laba cunto isku mar, wax ogolaanaya waqti badbaadi oo balaadhiyo noocyada kala duwan ee cuntada sida loo kariyo. Hal qalab waxaad ku diyaarin kartaa saxan weyn iyo saxan dhinaca saliidda yar leh, dhaqso badan iyo ur yar.
✅ Si Toos ah U Saar Majarafad
Faa'iidada kale ee Cecotec ay ku darayso moodelkan waa majarafad si ay cuntada si toos ah ugu kiciso. Isticmaalkeeda uma baahnid inaad u rogto maaddooyinka gacanta, sida noocyo kale oo badan, waxaanan iloobi karnaa cuntada ilaa uu diyaar u yahay inuu u adeego.
Sidoo kale, ayaa sheegay in majarafad la saari karo oo kuu ogolaanaya inaad wax karsato adigoon isticmaalin, taas oo siinaysa shiilan hawo kulul ka duwanaansho badan kuwa kale. Maskaxda ku hay in cuntooyinka qaarkood aan lagu samayn karin majarafad, sida pizza.
▷ Tiknoolajiyada caqliga leh ee 4D oo toos ah oo leh 1350 W
Qaybtan, Cecotec sidoo kale waa ka sarreeyaa inta kale, maadaama ay tahay tan kaliya ee ilaa hadda lagu daro. laba aag kulayl oo madaxbannaan waxayna kuu ogolaanaysaa inaad doorato kulaylka xagga hoose, xagga sare ama labadaba isku mar. Tilmaamahan gaarka ah ee suuqa ayaa ogolaanaya si fudud loo gaaro natiijooyin wanaagsan noocyo kala duwan oo cunto ah.
Inkasta oo awooddu ay u ekaan karto mid ka hoosaysa tartanka, nidaamka isha kulaylka ee labada ah ayaa kuu ogolaanaya inaad si fiican uga faa'iidaysato isticmaalka hoose isla mar ahaantaana in karinta la wanaajiyo marka la eego moodooyinka kale.
Mid ka mid ah sifooyinka noocaan shiilan waa la'aanta ur iyo firdhinta kuwaas oo fududeeya hawsha nadiifinta qalabka iyo goobta uu yaallo. Sidoo kale baaldigu waa aan dhegta lahayn oo laga saari karo, si ay u sahlanaato in la dhaqo, adigoo awood u leh inuu sameeyo xitaa makiinada weelka lagu dhaqo.
Daboolka sare haddii uu yahay mid yar oo la heli karo oo ku raaxaysan in la nadiifiyo, laakiin ma jiraan wax aadan xallineynin adigoo tirtiraya isticmaalka kasta ka dib si aysan wasakhdu u ururin.
Cecotec waxay ku qalabaysay 4D shiilan shiilan oo aan saliid lahayn oo leh a kantaroolka elektarooniga ah ee dhijitaalka ah oo leh bandhig LCD, kaas oo kuu ogolaanaya inaad doorato suxuunta hore loo habeeyey ama aad gacanta ku doorato qiyaaso kala duwan. Xakamayntan ayaa leh 8 barnaamij oo la xafiday oo leh cuntooyin hore loo diyaariyey oo kala duwan: Sauté, rooti rooti, ​​Chips, Foorno, Skillet, Bariis iyo Yogurt.
Waad ku mahadsan tahay barnaamijyadan kaliya waa inaad gelisaa maaddooyinka, dooro cuntada la kariyey oo sug ilaa uu si toos ah u damiyo saxankaaga caafimaadka qaba diyaar u ah inuu u adeego.
✅ Waqtiga iyo Heerkulka La Isku Halayn Karo
Ka baxsan barnaamijyada waxaan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hagaajiso heerkulka shahaado la doonayo by degree u dhexeeya 100 iyo 240 degrees centigrade iyo waqtiyada karinta inta u dhaxaysa 5 iyo 90 daqiiqo. Waad ku mahadsan tahay goobaha kala duwan ee kala duwan, oo ay ku jiraan aagga kulaylka, waxaan dooran karnaa cabbirrada lagama maarmaanka ah daraasiin cuntooyin kala duwan taas oo ay ku xifdisay.
Naqshadu waa cylindrical leh koofiyadda sare si aad u gasho saxaaradda la rari karo adigoo isticmaalaya gacan la go'i karo. Dibedda waxay ka samaysan tahay caag leh a dabool hufan oo kuu ogolaanaya inaad isha ku hayso cuntada iyo inta kale ee madow oo leh faahfaahin cagaaran.
Waa qalab xoogaa baaxad weyn oo aan ku habboonayn khaanad yar, inkastoo 3,7 kiilo oo miisaan ah Waxay aad uga kooban yihiin marka loo eego noocyada kale.
Cabirrada: 31 x 38 x 25 cm
Ka sokow haysashada 2 sano damaanad qasab, qalabkan waxaa soo saaray a Shirkadda Isbaanishka, taas oo fududaynaysa xal u helida dhibaatooyinka suurtagalka ah.
Cecotec ayaa suuqa ku soo bandhigtay moodelkan qiimihiisu dhan yahay 265 Yuuro, in kasta oo hadda la heli karo. qiimo dhimis ka badan boqolkiiba 50. Dhimistan, waxay u dhigantaa mid ka mid ah shiilayasha hawada ee leh saamiga waxqabadka ugu wanaagsan ee xilligan. Halkan waxaad ku arki kartaa dalabyada hadda jira ee dukaamada oo leh qiimaha ugu fiican, laakiin sidoo kale fiiri qalabka lagu daro mid kasta sababtoo ah way kala duwanaan karaan.
CusboonaysiiXusuusnow in aan hadda la heli karin, halkan waxaa ah beddelkeeda ugu wanaagsan:
Iyadoo ku xiran waqtiga ama dukaanka wax iibsiga, qalabyada qaarkood way kala duwanaan karaan, inkastoo Kuwa soo socda ayaa had iyo jeer lagu daraa iibka:
Baaldiga ugu weyn
Gacan ka go'i karo
Heerar 2 ah
Buug-gacmeedka iyo Buugga-karinta
▷ Agabka la heli karo
Shirkaddu si gaar ah ayay u iibisaa a baaldi fidsan ku haboon pizzas, omelettes ama xataa keega iyo sidoo kale a maro fudud oo wareegeysa ku fiican croquettes, nuggets ama wax la mid ah.
Eeg Qalabka Qiimaha
Xirmada agabka ikhtiyaariga ah ee TurboCecofry 4D.
Waxa ka mid ah qalabyada fudud ee cuntada fudud, sida raakishka kaa caawinaya diyaarinta cuntooyinka jilicsan ama nooc kasta ha ahaadee sida ulaha kalluunka, croquettes ama cuntooyinka fudud ee aad jeceshahay.
Qalab fudud oo ka samaysan bir aan tayo lahayn oo tayo sare leh.
Waxa ku jira saxaarad fidsan oo ku habboon in lagu kariyo biisasyada iyo diyaargarowga kale.
3-litir baaldi dahaarka leh, weel dhaqida badbaado leh oo la jaan qaada heerka caadiga ah ee TurboCecofry4D.
Fiidiyowga hoose waxaad ku arki kartaa qalabkan yar oo faahfaahsan oo si buuxda u shaqeynaya.
Fryer-kan super ayaa leh in ka badan 50 dib u eegis ku saabsan Amazon, ku filan si aad fikrad uga hesho aragtida guud ee isticmaalayaasha isku dayay. Inkasta oo dhibcuhu uu yahay 3.5 marka loo eego 5, waxaa yaraaday cabashooyinka aan wax shaqo ah ku lahayn qalabka laftiisa. Akhrinta ra'yiga, waxaa la arkay in badi iibsadayaasha ay yihiin aad ugu qanacsan natiijada taas oo bixisa badeecada calanka ee Cecotec.
Fikradeena, tani waa mid ka mid ah shiilan oo leh saliid yar ugu dhamaystiran oo wax ku ool ah suuqa hadda. Sida aan soo aragnay, waxay leedahay horumarro dhowr ah oo noocyada kale aysan lahayn iyo qiimo dhimista aan soo sheegnay runtii qiimo aad u wanaagsan ayay ku jirtaa.
2 Goobaha kulaylka ee madaxa banaan
Waxaan kaaga tagnay miis barbar dhig ah oo leh moodallo kale oo leh laba goobood oo wax lagu karsado:
2 Heerarka isku midka ah
Marka la dhammeeyo, toos ma u dami? Haa, mar haddii wakhtiga barnaamijku dhacay, wuu dami.
Miyaad jadwal siin kartaa wakhtiga bilowga? Ma awoodid, mana jirto cid kale oo hadda samaynaysa.
Haddii aad ku qanacday doodaha ay soo bandhigtay shirkadda Isbaanishka oo aad rabto inaad hesho Deep Fryer-kaaga ugu fiican waxaad ka iibsan kartaa halkan:
(Codadka: 50 Celcelis: 4)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » ⭐ Cecotec » Turbo Cecofry 4D
9 faallooyin ku saabsan "Turbo Cecofry 4D: Fryer Without Oil"
27 / 08 / 2019 at 17: 20
Hello galab wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aan u nadiifin karo daboolka turbo cecofry gudaha. Taasi waa haddii aan ka saari karo boolaladaha, kala furfuri karo shiilan oo aan ku nadiifin karo gudaha. Isticmaalka badan, aad bay wasakh u tahay mana garanayo sida loo sameeyo. Mahadsanid.
11 / 09 / 2019 at 13: 01
Hello. Ma aha mid aad u adag in la kala diro shaandhada si loo nadiifiyo, inkastoo ay ku xiran tahay xirfadda mid kasta. Haddi aad ku dhiirato, xasuusnoow in aad ka bixisid mishiinka mar walba iyo in aad halis u tahay in aad lumiso dammaanadda salaan
ISAABEL DAVIA CASTLE
19 / 04 / 2020 at 23: 26
Hello, caabbintaydii way jabtay, waa la hagaajin karaa, mahadsanid
25 / 04 / 2020 at 19: 32
Hello, mabda'a ahaan Cecotec waxay iibisaa qaybo ka mid ah qalabka guriga. La xidhiidh astaanta
24 / 01 / 2021 at 22: 15
Hadda waxaan iibsaday cecofry 4d, mana garanayo sida ay u damiso. Marka saxanku dhammeeyo, oo muraayadda buluuga ahi ay sii jirto wakhtiga oo biligleynaya, sidee buu u daminayaa iyada oo aan fiilada la furin?
16 / 03 / 2021 at 09: 56
Markaad hoos u dhigto badhanka korontada, ma damin kartaa?
11 / 03 / 2021 at 20: 16
Sannad ka dib markii aan haysto, caabbintaydii ayaa jabtay. Dammaanadda ayaa ii dabooshay. Daab-wareejintu sidii hore uma shaqayn. Guud ahaan mar kale ma iibsan doono taasi waa fikradayda
16 / 03 / 2021 at 09: 50
Laga soo bilaabo waayo-aragnimadeena, majarafad ka samaysan balaastiig waxay ku dhammaanaysaa dhibaatooyin. Dhawr jeer ayaa la innaga jabay oo waa in caagga kulaylka leh, uu ku dhammaado mid adag oo aakhirka qayb ka noqda. Waa dhinaca hoose ee qaabkan, laakiin qaybta togan ayaa ah in beddelkaagu yahay mid raqiis ah oo dhowr sano uu sii jiro, in kasta oo ay dhammaan ku xiran tahay bakooradda aad geliso shiilan.
28 / 04 / 2022 at 23: 01
Hello, waxaa i haysata dhibaato si uu taageeruhu u sameeyo buuq markaan ku dhejiyo mid ka mid ah 8-da nooc.